Coffee obere akpa
Kenkowaputa ebili pouch
Matte ebili pouch
Kraft akwụkwọ pouch
Brown akwụkwọ foil pouch
Akwụkwọ window pouch
White akwụkwọ foil pouch
Ewepụghị Bottom obere akpa
Side gusset obere akpa
Atọ Side Akara obere akpa
Child Gosiri obere akpa
plastic obere akpa
Plastic mkpọchi uwe obere akpa
Plastic nkwakọ pouch
obere akpa nri
A ole na ole nhọrọ nke kraft akwụkwọ akpa
Ị na ị na-ahọrọ ngwugwu akpa gị ngwaahịa? Ikekwe ị pụrụ ịtụle ihe kraft akwụkwọ nkwakọ akpa, kraft akwụkwọ onwe-oru na akpa na-mara dị ka usoro akwụkwọ mkpọchi uwe akpa, ya na-abụghị na-egbu egbu, keenweghiuto, mmetọ-free, na akara na National Environmental Standards, na elu ike, elu enviro .. .
The uru nke ewepụghị ike bags
Ke ofụri ofụri, ihe mejupụtara nkwakọ akpa kemgbe na ndụ anyị na-fọrọ nke nta, ọtụtụ n'ime ndị ahịa na ojiji nke ọtụtụ ihe mejupụtara ewepụghị ike nkwakọ akpa na nke ugbu a. Ya mere, ihe bụ uru nke a na-atọ ewepụghị ike nkwakọ akpa? Anyị ga-agwa gị na-esonụ banyere ewepụghị ike packin ...
Nso ke ọwọrọ atọ n'akụkụ obere akpa, bụ na-akpa na-welded na atọ n'akụkụ. Otu akụkụ ga-anọgide na-emeghe n'oge mmepụta. N'ụzọ dị otú a, ndị ahịa nwere ike na-etinye ha na ngwaahịa na akpa, na mgbe na-eji okpomọkụ akara mechie mmeghe nke na akpa. N'ọtụtụ ọnọdụ, agụụ nkwakọ dị mkpa n'ihi na atọ kwadoro bag ...
Doypack Bilie pouch
Bilie pouch na ọtụtụ-eji anyị kwa ụbọchị ndụ. Anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ nri dị ka kọfị, mkpụrụ, nri, beef jery, protein ike, ntụ ọka juru n'ọnụ site ebili pouch na mkpọchi uwe. N'ihi ya, taa, anyị na-ede isiokwu a ịme ebili pouch. First anyị na-ekwu banyere ihe onwunwe. The mbụ ụdị bụ kraft ebili maka ...
n'akụkụ gusset bag
Side gusset akpa na-inweta ewu ewu maka ọtụtụ ngwa gafee a dịgasị iche iche nke ọrụ. Ha inogide ihe na-enyere aka ịgbatị adị ndụ site n'ịhụ ngwaahịa na-anọgide n'enweghị akara ma na-echebe. Anyị n'akụkụ gusset akpa na-kasị n'ọtụtụ ebe na maka nkwakọ snacks na Fikiere oriri dị ka mkpụrụ, ...
Kọfị agwa bụ a nkịtị ọṅụṅụ na kwa ụbọchị ndụ. People amasị-aṅụ kọfị mgbe arụ ọrụ ike gwụrụ, ndị pụrụ iche na-abịa site n'ebe ọdịda anyanwụ Country. Coffee pouch na-eji na-kọfị agwa ogologo oge. Taa, anyị ga-ewebata kọfị agwa nkwakọ. Ihe mbụ, anyị na-ekwu okwu banyere ihe onwunwe. E nwere ihe abụọ ikwu ...
Adress: Room 266, 2nd Ft, QingShuiWan, Nke 7-1 TangKeng Road, LongGang, ShenZhen, 518115, China
Copyright © 2019 Edebere ikikere nile.
Clear Plastic Guzosie Up Pouches , Guzosie Up obere akpa Packaging , Guzosie Up obere akpa akpa , Kraft Akwụkwọ Resealable akpa , Clear Guzosie Up Pouches , Guzosie Up Plastic obere akpa Packaging ,